भोट कसरी लगाउने हेर्नुस ? | Emedia Hub UK
Home नेपाल समाचार भोट कसरी लगाउने हेर्नुस ?
भोट कसरी लगाउने हेर्नुस ?
Posted By: Prakash Raion: May 06, 2017 In: नेपाल समाचारNo Comments
काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावका मतदाताले भोट हाल्ने समय अव केहिदिन मात्रै बाकि रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्नका लागि अव ८ दिन बाकि रहेको छ ।
कतिपयलाई मतदान, भोट कसरी गर्ने भन्ने बारे कौतुहल्ता र अनविज्ञ पनि हुनसक्छ ।
यस पटकको चुनावमा एउटा उम्मेदवारले एकै पटक ७ जना प्रतिनिधी छनौट गर्न सक्ने भएकाले मतदाता बढी अन्यौलमा देखिएका हुन् ।
निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने ? मतदाताहरुलाई सजिलो होस भनेर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई सोधेर मतदानको तरिकाबारे जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
पहिला लाइनमा बस्नुस्:
यसरी दिनुपर्छ मत:
मतपत्र पट्याउँदा पनि होसियारी:
एउटा ठाडो लाइनमा एक जनाका दरले ७ वटा ठाडो लाइनमा मत दिएपछि मतदान प्रक्रिया सकिन्छ । त्यसपछि मतदाताले मतपत्रलाई विस्तारै पट्याएर मतपेटिकामा हाल्नुपर्छ ।
तर, मतपत्र पट्याउने क्रममा मतसंकेत गरेको स्वस्तीक छापको मसी यदि सुक्न भ्याएको छैन भने अर्को ठाउँमा गएर लत्पतिन सक्छ ।
राजेश हमाल पनि चुनावी प्रचारमा !
एभरेष्ट आईडल विजेता सोनाहाङ भन्छन्- बरु बेलायत छोड्छु तर संगीत छोड्दिन (अन्तर्वार्ता)